Fektriya yobuso obuNgabonakaliyo oFunekayo weMask kunye noMenzi | JBH yezoNyango
Maleko 3, FDA, CE evunyiweyo
Umgangatho obalaseleyo uvela entliziyweni yethu
Ukuthintela ngokufanelekileyo iibhaktheriya kunye neeerosol
Yenza uyilo lokutsala. ilungele ukusetyenziswa. ucoceko kunye nep
Ama-pores ahanjiswe ngokulinganayo kumphezulu, ophefumlayo kwaye ukhululekile, uvumela ulusu lwakho ukuba luphefumle ngokukhululekileyo.
Antifouling, ilaphu elinyibilikisiweyo sisitshixo
Uluhlu lwelaphu elinyibilikisiweyo linobuninzi obuphezulu kunye nefuthe lokucoca
Akukho malaphu anyibilikayo, ukusebenza kakubi kokukhusela
Ngezinto ezintle ezintsha
Ngezinto ezintle ezintsha. ukwala ungcoliseko lwesibini
ukutolika iinkcukacha ezithe vetshe
Izinto zeMveliso: Ilaphu elingalukanga, ilaphu elinyibilikisiweyo, ii-ear loops, ikliphu yebhulorho yempumlo
Ukusebenza kokucoca: Inokuthintela igazi kunye nolwelo lomzimba ekudluliseni imaski ukungcolisa lowo unxibileyo, kwaye inefuthe lokucoca elingaphezulu kwama-95% kwiibhaktheriya, kodwa inefuthe lokucoca ulwelo oluncinci.
Incwadana yemaski yobuso
Sebenzisa indlela efanelekileyo yokunxiba i-bette
1.Ukuhlola ukuba ukupakisha kuyisandi ngaphambi kokusebenzisa.Sicela ujonge ukumakisha kwiphakeji, umhla wokuvelisa, umhla wokuqalisa kwaye uqiniseke ukuba usebenzisa imaski ngexesha elifanelekileyo.
2.Imaski yeyokusebenzisa ixesha elinye, musa ukuphinda usebenzise kwakhona. Nceda ulandele imiyalelo yesibhedlele okanye iarhente yokhuselo lokusingqongileyo ukuze uyilahle emva kokusetyenziswa.
3.Isigqumathelo sinokutsha, nceda usoloko emlilweni osetyenziswayo.
I-4.Children yobudala obungaphantsi kweminyaka emi-3 ayifanelekanga kule maski.
Egqithileyo Ezilahlwayo Maski yoPhando
Okulandelayo: Isibhedlele soMbane
imaski yobuso elahlwayo emnyama
imaski yobuso elahlwayo eblowu
Izinto zokulahla ubuso ezilahlwayo abantwana
isixhobo sokulahla ebusweni
imask yobuso kwezonyango
ophakamisa isigulana ngesanti kubunzulu baphantsi, ophakamisa isigulana ngombane, iimaski zobuso zonyango, iimaski ezilahlwayo, ibhedi ehlengahlengiswayo kwizigulana, ukhuko lwezonyango oluhlengahlengiswayo,
iimaski ezilahlwayo, ophakamisa isigulana ngombane, ukhuko lwezonyango oluhlengahlengiswayo, ibhedi ehlengahlengiswayo kwizigulana, iimaski zobuso zonyango, ophakamisa isigulana ngesanti kubunzulu baphantsi,